Amacandelo kwi-iPhone yokwenyani
Kwi-iPhone eyiyo ungayifumana naluphi na uhlobo lolwazi olunxulumene hayi kuphela kwi-Apple kodwa kunye neentshaba zayo. Ngokusebenzisa amacandelo ahlukeneyo ungasifumana isisombululo sale ngxaki i-iPhone yakho ivelayo, usetyenziso olufuna ukuhlela iifoto zakho, ingqokelela yeyona midlalo ilungileyo okanye usetyenziso….
Ukongeza, unokwaziswa ngazo zonke iindaba, zombini izixhobo ezahlukeneyo zeapile kunye neenkonzo ezibeka kuthi, ngaphandle kokulibala ukuthelekiswa kweyona nto ibalulekileyo kwiimarike zeefowuni ze-Android.
Ewe nangoku, ngekhe usifumane isisombululo kwiingxaki zakho, ungaqhagamshelana nezinye ezahlukeneyo Abahleli beendaba ze-iPhone, ukuze sikwazi ukukunceda kangangoko sinakho.
Izifundo kunye neencwadana